Ubunxi be-Metallic Embroidery Intambo / Intambo ye-Metallic / Intambo / i-Glittery
M / MS / MHS / MH / MX Tshintsha ii-Metallic Yarns
Ububanzi: 1 / 127 '', 1 / 110 '', 1 / 100 '', 1 / 92 '', 1 / 85 '', 1 / 69 '', 1 / 50 '', 1 / 32 '', 1mm, 2mm, njl
Ukubunjwa: Ukwahlula ifilimu ye-PET idibeneyo (i-aluminium ehlanganiswe kunye ne-epoxy resin ekhusekileyo)
Ubunzima: 25μ, 30μ, 16μ, 15μ, 12μ, njl njl
Ukupakisha: 100g, 150g kunye ne-300g nge-spool
Umbala: Imibala engundoqo: isilivere negolide; Imibala ekhethekileyo kwisicelo, umninzi / iparele, imibala emininzi, i-fluorescent, ebalahlekileyo, umbala wombala, njl njl.
Isiqinisekiso: ISO9001, i-Oeko-Tex
Ukusetyenziswa: ngokubanzi esetyenziselwa ukuhlobisa iingubo (kuquka uboyiko, ilayiti, irayibhile, iilebula kunye nezixhobo zokusebenza), intsimbi edayiweyo, intambo yesikhonkwane, iitrato, i-shrubber, i-crafts art, njl.
Ukwakhiwa: m-Uhlobo sisinyithi film (1 / 69 '', 12 micron) ejijekileyo kunye 30D / 1F wenayiloni vulu * 2 iziphelo (okanye 20D / 1F * 2 uphela), 1 kuphelisa ngku igqunyiweyo, 1 ukuphela wazigqubuthela anticlockwise
Isiqalo: sinamandla oqinileyo kunye nombala obalaseleyo
Ukupakisha: 500g / i-cone, i-40cones / ctn
Ukusetyenziswa: i-sweaters, i-knitwear, i-tricot, i-jacquard yelinen, i-embroidery, i-stocking, njl.
Ukwakhiwa: MG-50 1 / 110 '' idibene ne-70D intambo yenyoni okanye i-68D / 75D intsimbi ye-polyester okanye i-75D ray
Isici: ukwakhiwa kwezinto eziqaqambileyo, ukuzivelela, kunemiphumo emangalisayo
Ukupakisha: 500g nganye etsobhileyo okanye zezindlu cone, 40cone / baseKapa
Ukusetyenziswa: izikratshi, izikhwama, iingubo, iingubo, iisokisi, imfashini ephezulu kunye nezinye iingubo ezidayiweyo
Ukubunjwa: 120D / 150D intsimbi ye-polyester okanye i-120D / 150D i-rayon okanye i-radiyon ehlanganiswe ngu-12μ, 1 / 110 ''
Ukupakisha: 250g, okanye 500g / cone
Ukusetyenziswa: ikakhulukazi esetyenziselwa intambo yokugcoba, yokwenza imisonto kunye nempahla yelinen
Ukwakhiwa: 120D / 150D ipholiyesta vulu okanye 120D / 150D rayon okanye wenayiloni 140D leyo isongwe ngokupheleleyo 12μ, 1 / 69 '' okanye 1 / 32 '' vulu sisinyithi
Umbala: Imibala engundoqo: isilivere negolide; Imibala efumanekayo kwisicelo: obomvu, obomvu, eluhlaza, obomvu, obomvu, obomvu, omnyama, njl .; Imibala ekhethekileyo kwisicelo: imvula / iparele, imibala emininzi, i-fluorescent, imbala, imbala, kunye nokunye. Isatifikethi: ISO9001, i-Oeko-Tex
Ukusetyenziswa: Ngokuqhelekileyo esetyenziselwa ukuhlobisa ingubo (kubandakanya ukugaya, ilayiti, irayibhile, iilebula kunye neencedisi), intsimbi edayiweyo, intsimbi yesikhonkco, iitrato, i-scrubber yekhitshi, ubugcisa bezobugcisa, njl njl.
IiNsimbi zoMnxeba ezingakumbi